NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 844
Akademy theatre : efa misehatra ireo mpiofana
Par Taratra sur 03/11/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Na mbola tsy vita tanteraka aza ny fianarana, efa miroso amin’ny fampiharana ka miaka-tsehatra ireo mpianatra teatra ao amin’ny Akademy theatre. Fantatra izao fa anisan’ireo handray anjara ary hitondra an-tsehatra piesy vaovao, mandritra ny “Nuit malgache” ao amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ireo mpianatra maherin’ny 70 ao amin’ity akademia ity. Ankoatra izany, […]
Kabary : raikitra fa hisy ny « Andro nasionaly »
Par Les Nouvelles sur 03/11/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Tontosa ny fihaonana teo amin’ireo mpikabary avy amina fikambanana 18. Tapaka tamin’izany fa isaky ny 15 septambra no hanamarihana ny « Andro nasionaly ho an’ny kabary ». Raha ny nambaran’ny nandroso io fotoana io, vanim-potoana tsy mahabe raharaha ny mpikabary sady tsy mbola filatsahan’ny orana io. « Haroso eo anivon’ny governemanta sy any amin’ny Antenimierampirenena izy ity mba […]
Eto Antananarivo : be loatra ny fanorenana tsy ara-dalàna
Par Taratra sur 03/11/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Fantatra nandritra fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny toeram-panorenana ny alatsinainy teo fa tsy hay tohaina ny fanorenana tsy ara-dalàna eto Antananarivo Renivohitra. Tsy manara-dalàna ny 70%-n’ny fanorenana eto Antananariv. Raha ny nambaran’Atoa Andriamanohisoa Gerard, tale jeneralin’ny fanajariana ny tany, tsy ho foana intsony ny “Bidonville” fa efa manjaka tanteraka izy ireo ka tanjona ny […]
67 ha : nidoboka am-ponja indray ireo jiolahy tratra nanao sinto-mahery
Naiditra am-ponja omaly, ireo jiolahy malaza ratsy amin’ny fanendahana sy fanaovana sinto-mahery eny 67 Ha sy ny manodidina. Saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahafito eny 67 Ha, teo am-panaovana ny asa ratsiny teo akaikin’ny poste 67 Ha ireto jiolahy ireto. Araka ny fanazavan’ny polisy, maro ny fitarainana voarain’izy ireo manoloana ny firongatry ny asa […]
Varotra madinika : mandeha ny tsenan’ny voankazo
«Mandeha ihany aloha izy izao e ! Na ny vahiny na teratany, samy mividy eto aminay daholo… », hoy ny mpivarotra voankazo iray etsy Antaninarenina, omaly raha nanontaniana. Nambarany fa tena mandeha ny tsena rehefa aorian’ny sakafo antoandro sy ny hariva rehefa mirava mpiasa iny. Etsy andaniny, tsy misy vidiny manokana ho an’ny vazaha na malagasy fa […]
Halatra gazoala : polisy ny iray amin’ireo tratra
Nohamafisin’ny kaomandin’ny vondron-tobim-paritra Antananarivo Ville, ny Chef d’escadron, Randriatsarafara Andry Sedera, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly fa hoe polisy ny iray amin’ireo olona sivy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ilay halatra gazoala teny Amoron’Akona, izay misy ny tetikasan’ny Filoham-pirenena. Voalaza fa ity polisy ity no tompon’ilay fiara P.309 nampiasaina tamin’ny fitaterana ireto gazoala halatra […]
Fipoahana teny amin’ny A&C Ivato : “Baomba artizanaly mitovy amin’ilay nipoaka teny Mahamasina”
Tsy mbola fantatra izay miketrika ny momba ilay baomba nipoaka teny Ivato afakomaly. Mitovy amin’ny nipoaka teny Mahamasina, hono, izy ity. Nisy ny olona nohadihadina. Mandray an-tanana ny fanadihadiana momba ilay zavatra nipoaka teny amin’ny A&C Ivato, afakomaly, tokony ho tamin’ny 8 ora alina, ny zandary sampana ady heloka bevava, eny Fiadanana. Araka ny vaovao […]
Ambohitrakely : fiara nitsoaka notifirin’ny zandary
Par Taratra sur 03/11/2016 Divers, NS Malagasy
Fiara Golf iray nandeha mafy be, nisongona fiara, teny Ankadindramamy, afakomaly tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany maraina, ka nifaoka zavatra teny amin’ny sisin-dalana sy fiara Sprinter iray niantsona teo amoron-dalana. Tsy nijanona anefa ny mpamily fa vao maika nandeha mafy nandositra niala ny toerana. Sendra nandalo tao anaty fiara ny zandary roalahy miasa […]
Tena izy sa sinema ?
Par Taratra sur 03/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Niteraka resabe ny fipoahana mahery vaika niseho teny amin’ny hotely AandC etsy Ivato. Samy nanana ny heviny ny mpanara-baovao. Nilaza kosa ny mpanao fanadihadiana fa baon,ba vita tananana toy ilay napoaka tamin’ny 26 jona tetsy Mahamasina no nirefotra teny Ivato. Toa manao sarin’ady indray ny fanjakana sy ny lohandoham-pisorona ao aminy raha ny fanehoan-kevitry ny […]
Saran-dalan’ny taxibe : andrasan’ny mpitatitra izay hataon’ny mpitondra
Tsy mbola nanapa-kevitra ! Miandry hatramin’ny faran’ity volana novambra ity ny Vondron’ny mpitatitra eto an-tanàn-dehibe (UCTU) hijereny izay fepetra raisin’ny fanjakana mikasika ny fitaterana manoloana ny fiakaran’ny vidin-tsolika, nanomboka ny 1 novambra teo. Tsiahivina fa nanondrotra ny saran-dalana ho 500 Ar ny UCTU, 4 oktobra teo, na nampidina ny vidin-tsolika aza ny fanjakana tamin’ny alalan’ny Ofisy […]
Naverina any am-ponja taorian’ny fitsarana : mitaky fahafahana ho azy dimy ny vahoakan’i Soamahamanina
Par Taratra sur 03/11/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tsy hanaiky hatramin’ny farany. Niakatra tampoka teny amin’ny fitsarana Anosy, omaly ny « Raharaha Soamahamanina » naha voarohirohy azy dimy mirahalahy mianaka. Naverina eny Antanimora izy ireo taorian’izany. Nampiaka-peo ireo vahoaka fa tsy hanaiky ny hanasaziana azy ireo. Hentitra sy nahitsy. « Raha misy sazy mahazo azy ireo, hiakatra amin’ny dingana ambonimbony kokoa ary hampiakatra ny raharaha […]
Resaky ny mpitsimpona akotry : faharetana sy fihafiana no toro-marika lalandava
Par Les Nouvelles sur 02/11/2016 Elucubrations, NS Malagasy
Aza mihevitra fa ny hatsaram-panahy no hany maniraka ny mpamatsy vola. Ny hitsikitsika tsy mandihindihy foana fa ao raha. Any ampiandohana dia efa mandiso ny fisainana be ihany ilay fitenenana azy ireny hoe mpamatsy vola, toy ny filazana hoe fanampiana sy fanomezana maimaim-poana no ataon’izy rehetra. Na toy izany aza ny fisehon’ny vatsy sasantsasany atolotry […]
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : hanala vela amin’ny Juve ny Lyon
Par Taratra sur 02/11/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hanamarika ity andro anio ity, ny andro fahatelo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, “ligue des champions”, taranja baolina kitra. Anisan’ny lalao andrasan’ny rehetra, ny fifandonan’ny Olympique Lyonnais amin’ny Juventus de Turin, ao amin’ny sokajy H. Hanala vela amin’ity, ny ekipa frantsay ary hanao ny fomba rehetra handresena an-dry zareo Italianina […]
Ambalavao Isotry : nodiovina ny lakandrano, nahisaka ireo mpivarotra
Par Taratra sur 02/11/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Mitohy hatrany ny asa fanadiovana ny tanàna iarahana amin’ireo rantsa-mangaika maro ao kaominina : Das, Dud, DTP,… Taorian’ny fotoana nanaovana fanentanana manokana ireo mponina sy ireo mpivarotra teny an-toerana mahakasika ny fahadiovana, niroso avy hatrany tamin’ny fanisahana ireo tsena na « desquatterisation » ny mpiasa. Nanao ny fanadiovana ireo lakandrano izy ireo avy eo. Vita […]
Kitra vehivavy – «Mada 2016» : tompondaka fanintelony ny FC Sab-Nam
Nifarana, omaly, ny fifaninanam-pirenena, eo amin’ny baolina kitra vehivavy. Tsy niova fa mbola voatazon’ny FC Sab-Nam ihany ny maha tompondaka azy. Mbola voaporofo izany, ny maha andrarezina azy ireo. 2014, 2015, 2016. Fanintelony nisesy, nahazoan’ny FC Sab-Nam, ny anarana maha tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny taranja baolina kitra vehivavy. Tontosa, omaly tany amin’ny kianja Rabemananjara, […]
Kere any atsimo : nanome vola hatramin’ny 36 tapitrisa dolara ny Amerikanina
Nambaran’ny masoivoho amerikanina, Robert Yamate, ny faran’ny herinandro teo, fa mitohy manampy ny faritra atsimon’i Madagasikara ny fanjakana amerikanina amin’ny alalan’ny sampandraharaha amerikanina misahana ny fampandrosoana (USAID). Misy ny fanomezana fanampiana vonjy aina mitentina 5 tapitrisa dolara. Mahatratra 36 tapitrisa dolara ny totalin’ny fanampiana amerikanina hatramin’ny 2014 noho mankaty ho an’ireo mponina ianjadian’ny haintany raha […]
Antananarivo : betsaka ny trano miorina tsy ara-dalàna
Par Taratra sur 02/11/2016 Divers, NS Malagasy
Notanterahina, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, ny atrikasa fanolorana ireo vokatra farany ho amin’ny paikady fanarenana ireo trano miorina tsy ara-dalàna eto Antananarivo Renivohitra. Tafiditra ao anatin’ny andiany faharoa amin’ilay fandaharanasa fandrafetana paikady fanatsarana ny tanàna manoloana ireo trano miorinorim-poana ity atrikasa natao omaly ity. Niarahana tamin’ny ONU Habitat ny hetsika. Nanohana ara-bola kosa […]
Orinasa : niverina tsikelikely ny fiaran’ny Tiko
Par Taratra sur 02/11/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Tafaverina, ny herinandro lasa teo indray, ny sasany amin’ireo fiaraben’ny orinasa Tiko, nisy naka na nangalatra tamin’ireny « Raharahan’ny 2009 » ireny. Tsy lavitra ny Renivohitra ny nakana ireto kamiao ireto ary efa eo an-tanan’ny tompony amin’izao fotoana izao. Efa maromaro rahateo ireo fiara na kamiao naverin’ireny olona ireny hatramin’ny nanaovan’ny mpanorina ny orinasa antso avo matetika […]
Poezia : ho tonga eto ny filohan’ny Slaam
Par Taratra sur 02/11/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Hiavaka ny fifaninanana nasionaly amin’ny « slam », hotanterahina ny 10 hatramin’ny 17 desambra eto Antananarivo, amin’ity taona ity. Ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra izany ny filohan’ny Société lausannoise des amatrices et amateurs de mots (Slaam), Pablo Michellod, izay mpanao « slam » fantatra amin’ny solon’anarana hoe « L’indomptable ». Ankoatra ny fanatrehany ity fifaninanana lehibe ity, hanolotra fampisehoana ihany […]
Rehefa niato kely… : hiverina an-tsehatra i Nina’s
Nambara teto, volana vitsivitsy lasa izay, fa hiato kely amin’ny mozika i Nina’s. Ny antony, niatrika ny fiterahana izy ka nanapa-kevitra ny hiompana tanteraka amin’izay. Araka ny vaovao nampitain’ny mpikarakara ny tarika kosa, fantatra izao fa efa hiverina an-tsehatra amin’izay ity mpanakanto ity. Efa mandray efa-bolana mantsy ny zanany ary afa-pana ihany koa i Nina’s. […]
« Fitiavana marina » : nodimandry i Doudou Michel
Nisahana andraikitra maro teo anivon’ny fianakaviana, mpiara-monina, mpiray tanindrazana. Sehatra maro no banga… Nindaosin’ny fahafatesana i Doudou Michel. Lavo ny andrarezina ! Nodimandry teo amin’ny faha-65 taony, ny 31 oktobra teo i Andriamparany Solomaniraka Michel, fantatra amin’ny anarana Doudou Michel amin’ny maha mpanakanto azy. Raha ny vaovao azo tamin’ny fianakaviany, efa nandalo fiatoana kely ny fony […]
Narisoa : « Ny hiran’i Jérôme Randria no tena nankafiziny »
I Narisoa, iray amin’ireo mpanakanto nifanerasera tamin’i Doudou Michel. Nambarany fa mpanentana anisan’ny tena mahay tokoa i Doudou Michel. Mpamokatra hetsika ara-javakanto ihany koa. Sady mpihira no mpamoron-kira. « … Ny fankafizana ireo hira nohirain’i Jérôme Randria no tena mampiavaka an’i Doudou Michel sy tsikaritra taminy tao anatin’ny fotoana nifaneraseranay », hoy i Narisoa. Nohamafisiny fa « tena […]
OIF : hisy fifaninanan-kira ahazoana 3 tapitrisa Ar
Sehatra iray hanehoana ihany koa ny kanto sy ny kolontsaina malagasy ny fivoriambe faha-16 an’ny frankofonia, hotanterahina eto amintsika, amin’ity volana novambra ity. Manoloana izany indrindra, mikarakara fifaninanan-kira ny foibe fanovozan-kevitra momba ny zavakanto ankehitriny eto Madagasikara (Craam). Mitentina 3 tapitrisa Ar ny loka hatolotra ho an’ny voalohany. Efa misokatra ny fisoratana anarana amin’ity fifaninanana […]
Fanamboaran-dalana : nitaky ny volany ireo mponina…
Leo ny fampanantenana poakaty ? Nidina an-dalambe tsy lavitry ny fanamboaran-dalana mihazo an’Ivato, miainga etsy Tsarasaotra, ireo mponina rava trano sy voatototra tany eny amin’iny faritra iny, afakomaly. Nitaky ny onitra tokony haloan’ny fanjakana aminy izy ireo satria efa ela loatra izany. Ny asa, efa ho vita nefa ny vola tokony homena azy ireo noho ny […]
« Précédent 1 … 842 843 844 845 846 … 1 110 Suivant »